Abakhwabanisi abantwana abanazihlangu | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 26, 2010 NgoLwesibini, Septemba 1, 2015 Douglas Karr
Izolo ndidibene nochwephesha kwezentengiso apha edolophini. Yayiyintlanganiso entle kwaye ndiyixabisile impendulo enzima endiyifumeneyo malunga nendawo yam. Ukubeka ngokulula, bendibeke indawo ekwiphepha elinye eliyinyani kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo kwaye andikaze ndiyitshintshe.
Ndide ndenza umsebenzi omninzi ndenziwa ngoncedo lukaMark Ballard kwindawo entsha… ndigungxula ngomnye wemifanekiso emikhulu yeStockphoto. Bekuya kuba yinto emangalisayo - ukuba ndikhe ndaba nexesha lokuyigqiba.
Inyaniso kukuba, andiqinisekanga ukuba ndiya nanini ndinexesha lokuyigqiba. Ke… ndiqhathile kwaye ndafumana umxholo omnandi endiye ndakwazi ukuwuthenga kunye nokwenza ngokwezifiso kumcimbi weeyure. Indigcinile kwade kwayi-4 kusasa namhlanje, kodwa indawo entsha ilula, ukuya kwinqanaba, kwaye ibonelela ngalo lonke ulwazi olufunwa ngumntu malunga nokuba yintoni leyo DK New Media ayenayo.
Ndophule omnye wemithetho yam yoyilo-ndibeka umxholo kunye nefonti emhlophe kwimvelaphi emnyama. Oko kwenza ukuba kube nzima ukwetyisa; Nangona kunjalo, ndimalunga ne-glitz enale ndawo kwaye ndingagxili kugcino lweendwendwe kakhulu. Le ndawo inye yephepha yahlukile (qiniseka ukuhamba kwaye ucofe icandelo leenkonzo).
Kuya kubakho icandelo lamaqabane kwikamva elikufutshane kuba uninzi lwesicwangciso sam seshishini. Ndazise indlela othanda ngayo ukuza kuthi ga ngoku, nangona kunjalo!
I-imeyile ye-HTML + Iimpawu zeAlt = IiBagels ezingakumbi zithengisiwe